Ahoana no Mifidiana Snow sahiratsy - China Richina
Ahoana no Hifidianana ny Snow lapelina
A Snow lapelina natao ho an'ny fampiasana backcountry afaka handamina raharaha isan-karazany, fa hampiely fanavotana no mora indrindra iray tena ilaina. Ity lahatsoratra ity dia manome oram-panala-sahiratsy soso-kevitra sy ny soso-kevitra fampiasana amin'ny fomba iray miantsena.
Mampiasa ho Backcountry Snow lapelina
Ny antony manan-danja indrindra mba hitondra ny iray dia raha misy zavatra riaka. Raha toa ianao fitaovana amin'ny riaka transceivers sy ny Milaza koa fa tsy manana fomba mihady ny niharam-boina, ianao ao anatin'ny toe-javatra tena ratsy.
Ny olona tsirairay ao amin'ny vondrona, fa tsy hoe ny 1 na 2, nankany an-ririnina dia tsy maintsy mitondra backcountry angady. Tsy fantatro hoe iza ianao no tratra tao amin'ny riaka, ary te-ho azo antoka fa misy lapelina rehetra tsy nalevina.
Sotron'afo koa ampiasaina mba mihady lavaka famorian-drano ho an'ny famaritana backcountry snowpack toe-piainana. Matetika nandritra ny diany, mpikambana ao amin'ny antoko dia tokony mibosesika ho any amin'ny oram-panala mba hijery ny zava-mitranga ary voahitsakitsaka. Ny oram-panala lavaka mamela anao mba hamaritana raha toa malemy sosona-misy afaka hanafaka sy ireo manomboka ny solafaka. Bebe kokoa amin'ny fianarana snowpack, dia jereo ny torohevitra Richina Ltd.
Ny mahazatra kokoa ny fampiasana ny oram-panala lapelina dia ny sokitra avy ambaratonga toerana iray ho an'ny trano-lay ny oram-panala, rehefa filasiana na Glacier rehefa niakatra. Afaka asa sokitra avy ny windscreen na mihady lakozia faritra, tanteraka tamin'i seza, raha toa ianao ka tia.
Angamba tsy dia fantatra tsara fa ny angady avy amin'ny mora raisina noho ny oram-panala vaovao nandavaka mba ketraka noho ny rano fisotro madio. Scooping amin'ny rano tavoahangy na ny tananao koa ny miasa, fa mahazo haingana io mandreraka sady nangatsiaka ny andro.
Mazava ho azy fa backcountry sotron'afony afaka manampy anao koa ny fiara mihady avy tao amin'ny fiandohan'ilay lalan-kely, na amin'ny Ski ala nenina.
Miantsena ho Snow lapelina
Lafin-javatra manan-danja rehefa miantsena angady no mahita ny tsara mandanjalanja ny hery, lanja, vary haben'ny / endrika sy mafy fampiononana.
Backcountry sotron'afo dia natao ho roa matanjaka sy maivana;
6000-andian-dahatsoratra aluminium no ampiasaina matetika indrindra ho an'ny zana sahiratsy sy ny lelany. Na dia plastika maivana, aliminioma manome ny hery sy mateza ilaina ho an'ny vonjy taitra fampiasana.
Endrika iray tsy manam-paharoa, ny Snow claw, mampiasa avo-hakitroky polyethylene (HDPE) Ho toy izany koa nanakodia ka voatahiry ao an-fonosana. Io hazavana modely faran'izay-mahasoa kokoa noho ny oram-panala nitoby noho ny any amin'ny sehatra riaka.
Blade Size sy ny endrika
Blade mitovy habe eo amin'ny modely. Lehibe kokoa noho ny lelany dia be ny oram-panala mampihetsi-po haingana, fa mitaky hery bebe kokoa, ary mety Exhaust anao haingana kokoa. Kely lelany dia mora kokoa ny hiatrehana, ary mety hamela anao sahiratsy amin'ny tahan'ny haingana nandritra ny vanim-potoana intsony.
Vary ihany koa ny endriny mitovy. Fisaka lelany no tsara indrindra ho an'ny famoronana malamalama ny oram-panala-lavaka rindrina ihany; ny serrated hareza sisin'ny manampy bust ny ranomandry.
Ny ankamaroan'ny backcountry sotron'afo dia manana zana segmented telescoping na ho mora mifandray ny fonosana. Mifanaraka izy ireo miaraka amin'ny lohataona-mavesatra entana bokotra izay miseho an lavaka ao amin'ny fizarana mampifandray.
Famohana, matetika vita amin'ny plastika ho mora mafy, avy amin'ny endriky isan-karazany:
Ny T-mafy, izay mahazo eo amin'ny rantsan-tananao izy, dia maivana ka manao ny tsara ho an'ny ankamaroan'ny olona. Mety hisy hahazo azy hafahafa, rehefa manao mittens na overmitts.
Ny D-mafy dia matetika bulkier ary somary mavesatra. Manolotra ny famolavolana sy mahomby dia matetika no mora kokoa ny mampiasa amin'ny mittens.
Ny L-mafy no tsy mahazatra, nefa manome safidy ho maivana mampahatsiahy ny vaccuum tahony madio kokoa.
Mifidiana mafy izay mifanaraka aina eny an-tananareo.